Hoggaan Haggaagsan, Horumar Habaysan, Dadwayne Hanuunsan – W/Q: Mowliid Saleeban Gaboobe | Himilo Media Group
Gaadhitaanka yoolka bulsheed ee dunida tartamaysaa waxa uu ku xidhan yahay fahan qoto dheer oo laga helo guud ahaan habka iyo hannaanka bulsho u dhaqan tahay iyo arrimaha togan ee ay ku taamayso. Sida aan ku rejo weynahay, haddii si qummaati ah looga fekero weyddiimo darandoorri ah isla markaana warcelintooda muddo dheer lagu foogganaado waxa suuragal ah in la gaadho hoggaan hagaagsan, horumar baahsan iyo dadweyne hanuunsan.
Waa sidee hoggaamiyaasha guusha ka gaadhay hoggaamintoodu?
Tan iyo waagii la abuuray goor iyo ayaan ba, aadanuhu waxa uu ahaa halgamaaga koowaad ee la tacaalayay taxaddiyada adag ee nolosha isagoo ku tallamayay inuu mar uun guulo waaweyn soo hooyo. Aqoonyahannada dunidu waxa ay isla qirsan yihiin in dedaalka koowaad la dul dhigo aadanaha – ha noqoto in wax la baro – maankiisa iyo muruqiisa la quudiyo iyo inuu helo hoy iyo, hu’. Qarnigan 21aad si gaar ah ayaa dedaallo xooggan loo geliyaa dhisidda aadanaha waxaana laga alkumay gees dhan oo aqoon ah oo la yidhaahdo Human Resource Management. Cilmigan oo lagu darso jaamacado badan oo dunida ah ayaa lagu ogaaday in dedaalka la geliyo aadanaha guud ahaan gaar ahaanna shaqaalaha ay sababi karto horumar weyn oo laga gaadho geeso badan oo nolosha ah.
Hoggaamiyaha tolmoon waa inuu ka fekeraa:
3-Sababahee keena gadoodka shacabka ee xukuumaddiisa iyo kalsooni-darrada kaga timaadda shacabkiisa?
Horumar habaysan :- Adoo dunida horumartay eegaya isla markaasna aan ka tagayn Afrikaan nimada maxaan ku gaadhi karnaa horumar hagaagsan oo casriya? Weyddiintaas oo ah mid kakan haddana waxa aan u soo afmeeri lahaa inta ogaalkay ah: ka faa’idaynta kheyraadka bulsho ay leedahay oo dadku ugu horreeyaan. Aqoonyahannada dal ku leeyahay waa inay sameeyaan deraasado wax-ku-ool ah kuwaas oo bulshada ku hagaya tubta toosan – waa inay soo bandhigaan kheyraadka dihin ee dalka iyo hannaanka loo mari karo ka faa’idayntiisa. Sidoo kale, waxa habboon tayaynta waxbarashada oo iyadu noqon karta tiirka koowaad ee bulsho ka dhismi karto. Waxbarashada aasaasiga ah ayaa muhiim ah in aad loo dhiso inta aan jaamacadaha iyo dugsiyada sare la eegin.
Qalinkii: Mowliid Saleeban Gaboobe